Kabhoni (kubva kuChiratini: carbo kureva "marasha"; muChishona unogona kunzi Murasha kana Rhasha) inhangande re mushonga rine chiratidzo C uye numeri ye hatomu 6. Isinausimba ne hombaina (tetravalent) ichiita kuti mhodzigetsi mana avepo kuti aumbe bhondi rigombedzwana re mushonga. Ndeyeboka rechigumi nemana retafura yerupotera. Kabhoni inongoumba inenge 0.025% chete yegoko reRinopasi. Enzanhara nhatu dzinongoitika, 12C ne13C ichidzikama, ukuwo 14C irhedhiyosomo (radionuclide), ichiora nehafu yeupenyu hwemakore angangoita 5,730. Kabhoni chimwe chezvinhu zvishoma zvinozivikanwa kubva kare-kare.
Rhasha - kureva Kabhoni zvichienderera nechirevo chezita kumutauro warakabva.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabhoni&oldid=94755"
Last edited on 12 Chivabvu 2022, at 11:03
This page was last edited on 12 Chivabvu 2022, at 11:03.